घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
एलबीले फुल स्टोरीको फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ उपनाम "सेन्ट मैक्स“। हाम्रो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
एलन सेन्ट-म्याक्सिमिनको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट्स: क्रानिकल लाइभ, 90Min, ट्विटर र गेटफुटबल न्यूज फ्रान्स
हो, सबैलाई थाहा छ सेन्ट-म्याक्सिमिन केही फरक छ, बक्समा एक ज्याक जसको गति, सीप र मैदानमा ट्रिक्री फुटबल प्रशंसकहरूलाई उत्साहित बनाउँछ। जहाँसम्म, केवल एक हातले थोरैले एलन सेन्ट-म्याक्सिमिनको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
सुरू गर्न, उनको पूरा नामहरू छन् एलन इरानी सेंट-मैक्सिमिन। उनी मार्च 12 को 1997th दिन उनको आमा, नाडेज सेन्ट-म्याक्सिमिन, र बुबा एलेक्स सेन्ट-म्याक्सिमिनको, फ्रान्सको दक्षिणपश्चिमी उपनगरहरू पेरिसको दक्षिणी पश्चिमी उपनगरहरूमा पर्ने कमेन्ट-मालाब्रीमा जन्मेका थिए।
आफ्ना सँगी भाइहरू जस्तै; थॉमस लेमर, थियरिरी हेनरी, दिमिरी पाईट र किंग्स्ली कोमैन, फ्रान्सेली मानिस सम्बन्धित छ फ्रान्सको गुयनिज क्रियोल जातीय समूह क्यारिबियन र दक्षिण अमेरिकी परिवार जराको साथ। जे होस् फ्रान्समा जन्मिए पनि सेन्ट-म्याक्सिमिनको पारिवारिक उत्पत्ति गुयाना (उनको आमाको पक्ष) र ग्वाडेलूप (उसको बुबाको पक्ष) बाट भएको हो।
धनी अभिभावकहरूको जन्मले सेन्ट-म्याक्सिमिनलाई जीवनको उज्ज्वल सुरुवात प्रदान गर्‍यो। ऊ एक माथिल्लो श्रेणीको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्किएको थियो र एक बच्चाको रूपमा धेरै सहज थियो। एलन सेन्ट-म्याक्सिमिनका अभिभावकहरूले उत्तम वित्तीय शिक्षा पाएका थिए र कहिले पनि पैसाको साथ सled्घर्ष गरेनन्। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनको आमाले एक पटक 'को पद धारणशिक्षा निर्देशकपेरिस उपनगरमा अवस्थित एउटा लोकप्रिय स्कूलमा जबकि उनका बुवा एलेक्स पेरिस, फ्रान्समा अवस्थित पेरिस डिडोरोट विश्वविद्यालयमा अफिस प्रशासकको रूपमा काम गर्थे। दुबै आमा बुबा बुबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई इसाई धार्मिक विश्वासको पालनामा हुर्काए।
प्रारम्भिक वर्ष: एलन सेन्ट-मैक्सिमिन तीन बच्चाहरू मध्ये कान्छोको रूपमा हुर्केका थिए। उनीको कूर्ती नामको जेठो दाइ र बहिनी छ जसको नाम लेख्ने क्रममा अज्ञात छ। मेउडन सहरमा हुर्केका, जवान सेन्ट-म्याक्सिमिनले नाच र फेसनलाई आफ्नो रुचिको रूपमा लिए। जीवनमा त्यो फेसनलिस्ट दृष्टिकोणले उनलाई हेडब्यान्डको लागि प्रारम्भिक समानता लिएको देख्यो, जुन विकास अहिले सम्म जारी छ।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिनको हेडब्यान्ड्सको प्रेम कुनै नयाँ होइन। उसको बाल्यकालको फोटोले यो सबै भन्छ। क्रेडिट: दैनिकमेल
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
सेन्ट-म्याक्सिमिनका अभिभावक र स्कूल शिक्षकहरूले उहाँलाई हुर्काउँदा उत्कृष्ट बनाउन आवश्यक सबै मूल्यहरू दिए। पछि एक सानो स्कूलको बच्चाको रूपमा, एलनलाई प्रत्येक पटक उसको स्कूलबाट घर छोड्दा उसको आमाले 10 यूरो दिए। उनले पैसा खर्च गरेर क्यान्डीहरू किन्थे र खाँचोमा परेका आफ्ना साथीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछन् (उसको प्रारम्भिक उदारताको संकेत)। स्कूलमा छँदा, एथलेटिक्स र फुटबलमा सेन्ट-म्याक्सिमिनको प्रतिभा पत्ता लगाईयो र प्रशिक्षक वा संरक्षक बिना नै उहाँ आफैंले समाहित गर्नुभयो। त्यसबारे बोल्दै, उनले एक पटक भने;
“मेरो प्रतिभा स्वाभाविकै मलाई आयो। मैले जताततै बल, स्कूल, घरमा, आदिमा बल लिएँ। प्रशिक्षक नभए पनि म जहिले पनि फुटबल खेल्थें। यो मेरो आफ्नै दृष्टिकोण थियो, मैले चाहेको तरीकाले। मेरो गति र सीप स्वयं-सिकाइएको थियो "
सबै खेल विकल्पहरूमा, यो एथलेटिक्स थियो कि दौडको लागि आफ्नो स्वाभाविक स्वभावलाई पहिलो धन्यवाद आयो जुन उहाँ सानैदेखि हुनुहुन्छ। पछि, उनले फुटबलमा एथलेटिक्स लागू गरे र उनले आफ्नो जेठो भाई, कर्टिससँग खेल खेल्न शुरू गरे जो त्यस समयमा फुटबलर बन्न चाहन्थे। प्रारम्भमा, सेन्ट-म्याक्सिमिनले आफ्ना सीपहरूमा भरोसा राखे, एक विकास जसले उसलाई विश्वास गर्न लगायो कि उनीसँग पेशागत जान प्रतिभा छ।
आफ्नो भाइसँगै ट्याग गर्दै, सेन्ट-म्याक्सिमिनको पहिलो अभियान उनको लागि फुटबल बलको साथ असाधारण चीजहरू कसरी गर्ने सिक्नको लागि भयो। उनले त्यो सबै गरे जुन उनको छिमेकी केटाहरूको भीडबाट बाहिर खडा हुने नाममा थियो - जहाँ फुटबलको अवसर सीमित थियो। दिनदिनै, फ्रान्सेली व्यक्तिले क concrete्क्रीट र घाँस सम्बन्धी आफ्नो कलाको सम्मान गर्न थाले। सेन्ट-म्याक्सिमिन आफ्ना भाइको उमेर वरिपरि केटाहरूसँग खेले (दुई वा तीन वर्ष उसको जेष्ठ)।
सेन्ट-म्याक्सिमिनको असाधारण गति र ड्रिबलिंग कौशलका साथ उनले उनको वरिपरि रहेका केटाहरूलाई भन्दा बढ्ता देखे। सडक फुटबलर जो धेरै हदसम्म बेहोश गरिएको थियो त्यो स्थानीय क्लब- भेरियरेस-ले-बुइसनसँग ट्रायलको लागि अवसर पाउने भाग्यशाली थियो। 34 मिनेट ड्राइभ र 10.8km उसको परिवारको घरबाट। त्यो बेला दुबै भाईहरू (कर्टिस पहिलो भए) सफल भए उनीहरूको साथ एकेडेमी, को खुशी सेन्ट-मैक्सिमिनको परिवारका सदस्यहरूको वास्तवमा कुनै सीमा थिएन।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
एक जवान छँदा, सेन्ट-म्याक्सिमिनले अर्को क्लब, यूएस रिस-ओरंगिसमा प्रगति हुनु अघि केही महिनाको लागि युवा क्लब भेरीरे-ले-बुइसनमा उनको व्यापार सिके। 55 मिनेट ड्राइव / (34.5 किमी) मेरो परिवारको Meudon बाट। क्लबमा, उहाँ दुई शिक्षक द्वारा हेरचाह थियो, जीन लुइस लेसर्ड र डिडियर डेमन्ची। सेन्ट-म्याक्सिमिन3वर्षको जादूको समयमा उनको शिक्षक फ्रेडरिक फरेराको शिकार अन्तर्गत खेल्थे।
धेरैले सोचेजस्तै, उसले आफ्नो क्यारियरको लागि राम्रो शुरुआत गरेको थियो। सेन्ट-म्याक्सिमिनको निरन्तर प्रदर्शनको कारण हेर्दा अत्यन्तै रोमाञ्चक थियो गति र कौशल। यो उपलब्धि उनले एसीबीबी (एथलेटिक क्लब डि बोउलोन-बिलनकोर्ट) नामको फ्रान्सेली बहु-प्रयोजन अकादमीमा बृद्धि गर्दै देखे जुन वर्ष 2007 मा थियो।
ACBB केवल एकेडेमी मात्र थिएन, तर एक स्पोर्टि brand ब्रान्ड जहाँ सबै अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूलाई भर्ना गर्न चाहान्थे। यो किनभने अकैडेमीले आफ्नो खेलाडी शीर्ष फ्रान्सेली क्लबमा प्रक्षेपण गर्न प्रतिष्ठा राख्दछ। हेटेम बेन अरफा, यासिन बामौउ, नाम लिने तर केहि क्लबबाट पार भयो।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि
सेन्ट-म्याक्सिमिन किशोरावस्थामा हुर्किएपछि उनले यसमा खेल्ने सपना देख्न थाले प्रिमियर लिग। त्यतिखेर, फ्रान्सेली केटा आर्सेनललाई हेर्दै जान्छन् थियरिरी हेनरी सबै दिन टेलिभिजनमा।
आफ्नो सपनातिर काम गर्दै, युवा स्टारले गरिरहे जो उसले सधैं राम्रो खेल्थ्यो - आफ्नो dribbles र वेग संग एक अनौंठो तरिकामा व्यक्त। आफ्नो जोडी बीचको विशिष्टताको व्याख्या गर्दै सेन्ट-म्याक्सिमिनले एक पटक भने;
"एकेडेमी मा, तिनीहरू प्रशिक्षण, एक स्पर्श, दुई स्पर्श। सबैले अवलोकन गरे कि म फरक गरी पालेको हुँ। म धेरै आकर्षित गर्दछु र ठूला र बलियो केटाहरूको बिरूद्ध खेल्न भनियो। मैले कसरी उनीहरूलाई पिट्ने भनेर सिकें र एकै साथ, आयोडेले लात हान्दै "
त्यस समयमा उनका प्रशिक्षक, गुइलाउम सबाटीर, उसको वरिपरि उनको टोली निर्माण। आफ्नो पहिलो प्रतिस्पर्धी खेलमा, एलन सेन्ट-म्याक्सिमिनले 8 गोल गरेर एक छाप बनाए। आफ्नो युवा युगमा एक घटना मानिन्छ, उसले फ्रान्स भर मा भर्तीकर्ताहरु बीच एक ठूलो प्रतिष्ठा प्राप्त। चाँडै, सेन्ट-म्याक्सिमिनले आफ्नो शैक्षिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो निर्णय लिइयो सेन्ट-एटिएन्ने, एक क्लब जसले उनलाई एकेडेमी स्नातक तर्फ सुरक्षित वर्षमा पुर्यायो।
At सेन्ट- Étienne बी, सेन्ट-म्याक्सिमिन उनीहरूको उज्ज्वल खेलाडीहरू मध्ये एक बन्न पुगे, एक विकास जसले उनलाई उनको फ्रान्सेली राष्ट्रिय कलअप कमायो। दुर्भाग्यवश, क्लबको वरिष्ठ टोलीमा प्रगति गर्दा फ्रान्सेली प्रतिभाले पर्याप्त खेलको समय पाइरहेको देखेनन्। मोनाकोको सर्तले पनि काम गरेन किनकि सेन्ट-म्याक्सिमिनले बेन्च गर्न सकेन बर्नार्डो सिल्वा, एंथोनी मार्शल र जोआओ माउन्टिनो जो उनीहरूको शक्तिको शिखरमा थिए।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
Loanण मा सार्दै स्पोर्टि Club क्लब बस्टियाइस सेन्ट-म्याक्सिमिनको लागि सबैभन्दा विश्वासिलो कोर्स बन्न पुग्यो, जसले भर्खरै पैसा तिर्ने छैन तर नाइसलाई उनी मोनाकोबाट 2017 को गर्मीमा हस्ताक्षर गर्न राजी भए।
नाइसमा, सेन्ट-म्याक्सिमिनले गम्भीर कदम चाल्न सुरु गरे, प्याट्रिक भिराको नेतृत्वमा क्लबको लागि एक मुख्य कलाकार बन्नुहोस्। क्लबको लागि उसको प्रदर्शनले न्यूकासल युनाइटेडका म्यानेजर ब्रुसलाई आकर्षित गर्‍यो जो आफ्नो प्रशंसकहरूलाई उत्साहित पार्न कसैको खोजीमा थिए, जसले उनीहरूलाई आफ्नो सीटबाट झिक्यायो।
सेन्ट-म्याक्सिमिनको प्रीमियर लीग सपनाहरू अन्ततः सम्भव भएको थियो ऊ अगस्त2को 2019nd मा न्यू कैसलमा सामेल भएपछि। तुरून्तै 2019 / 2020 मौसममा, रyed्गित सुनौलो, स्पिकी ड्रेडलॉक्सको साथ आत्म-स्टाइल फुटबलर उत्साहजनक प्रशंसकहरू शुरू भयो। सेन्ट-म्याक्सिमिनले प्रीमियर लिग डिफेन्डर्सहरूको हृदयमा आफ्नो साहसी अग्रेषण फटहरू सँग दौड हासिल गर्‍यो।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन तुरून्त आफ्नो पहिलो प्रीमियर लीग सीजनमा प्रशंसक मनपर्ने भए। छवि क्रेडिट: दैनिकमेल
हरेक समय सेन्ट-म्याक्सिमिन बलको साथ थिए, तपाईंलाई थाहा छ उसले के गर्दैछ- पछाडि, मोड, फेन्ट, swerve, dribble विगतका विरोधीहरू र बल उसको खुट्टामा जोडिएको साथ अगाडि बढेको। उसलाई रोक्नु अर्को कुरा हो, तल भिडियो प्रमाणको अंशबाट अवलोकन गरिएको जस्तै।
माथिको भिडियो हेर्दै, तपाईं सहमत हुनुहुनेछ कि सेन्ट-म्याक्सिमिन कुनै श doubt्का बिना, 'ज्याक ' बाकस भित्र। आफ्नो dribbling क्षमताहरु र ट्रिकरी एसाइड (उसको कालो र सेतो अँध्यारोमा), शक्तिशाली विger्गरले पनि तावीजमानी रिकभरीहरू बनाउनको लागि ठूलो मात्रामा उर्जा चाहिन्छ। तल भिडियो प्रमाणको एक टुक्रा छ।
लेख्ने समयमा, सेन्ट-म्याक्सिमिन निस्सन्देह न्यूकैसलको टिमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडी र प्रिमियर लिगमा अवलोकन गर्ने सबैभन्दा रमाईलो खेलाडीहरू मध्ये एक हो। निस्सन्देह, फुटबलमा फ्यानहरू ठूलो संख्यामा एक युवाले उनीहरूको आँखाको अगाडि विश्व-स्तरीय प्रतिभामा फस्दै गरेको देखेर छन्। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
उनको प्रसिद्धिमा बृद्धि संग, यो निश्चित छ कि सबै न्यूकासल प्रशंसकहरूले चिन्तित हुनुपर्दछ कि एलन सेन्ट-म्याक्सिमिन वास्तवमै विवाहित छ र अझै पनि उनकी श्रीमतीसँग छ वा एक प्रेमिका छ। हो! त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्ने छैन जुन उसको प्यारो हेराईले आफ्नो खेलको शैलीसँग मिलेर उसलाई सम्भावित प्रेमिका चाहेको सूचीमा राख्छ।
डब्ल्यूटीफुटका अनुसार फ्रान्सेली एक पटक मार्ग्क्स नामको केटीलाई एक्सएनयूएमएक्सको साथ डेटि। गर्थे भन्ने आरोप लगाइएको थियो, उनको समयमा जर्मन क्लब (ह्यान्नोवर एक्सएनयूएमएक्स) सँग। रिपोर्टका अनुसार मार्गाक्स (तल चित्रमा) अब उसको पूर्व प्रेमिका बन्छ।
एलन सेन्ट-म्याक्सिमिनले एक पटक मार्गाक्सलाई डेटि। गरेको आरोप लगाए। छवि क्रेडिट: WTFoot
लेखनको बखत, एलन सेन्ट-म्याक्सिमिनलाई दुई प्यारी छोरीहरू (लियाना र निन्हिया) दिइन्छ जसलाई उनले आफ्नो राजकुमारीहरू भने। तल अवलोकन गरिए अनुसार दुबै केटीको कपालमा सावधानीपूर्वक वेणीहरू उनीहरूको बुवाको छवि र समानताको प्रतिबिम्ब छन्। चित्रको बायाँ सुन्दर लियाना (बाँया) र निन्हिया (दायाँ) छन् किनकि उनीहरूले आफ्नो सुपर बुवाको आरामदायक सुविधा पाए।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिनका छोरीहरू- लियाना र निन्हियालाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: TheTimesUK
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
एलेन सेन्ट-म्याक्सिमिन व्यक्तिगत जीवनलाई उसको सबै ड्राईबल्स र टाँकोबाट टाढाबाट चिन्नेले तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको अझ राम्रो दृश्य पाउन मद्दत गर्दछ।
सुरू गर्दै, त्यहाँ वास्तवमा उसको लागि आफ्नो सीपहरू, रत्न र डिजाइनर लेबलहरू भन्दा बढी छ। हो!, तपाईं लाग्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ केवल चम्किलो हुनुहुन्छ। तर सेन्ट-म्याक्सिमिन वास्तवमा एक स्मार्ट मान्छे र सामान्य व्यक्ति हो जुन उसले जान्दछ कि उसले के गरिरहेको छ; अरूलाई पहिले आफैंसाथ राख्नु। बीबीसी संग बोल्दै, सेन्ट-म्याक्सिमिनले विश्वलाई पिचमा सबै गर्ने चाहनाको बारेमा जानकारी गरायो, प्रशंसकहरूलाई खुसी पार्नुहोस्, अन्य टीमका साथीहरूलाई पनि मद्दत गर्नुहोस् तपाईको लक्ष्य गोल नहुनु हो। तल भिडियो प्रमाणको एक टुक्रा छ।
न्यु क्यासलमा सम्मिलित भएको एक महिना पछि, इ England्ल्यान्ड उत्तरपूर्वका प्रशंसकहरूले प्रेमको कारण उनीहरूको स्टार म्यानलाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्ने उपायहरू बनाएका थिए - जुन विकासले उनको मन्त्रलाई जन्म दियो। सेन्ट-म्याक्सिमिनको नामको लोकप्रिय जप रहेको छ - जुन एक खेलमा मात्र होइन तर क्लबहरू सहित जताततै गाईन्छ। यसलाई तल सुन्नुहोस्;
धेरै प्रशंसकहरूको लागि, यस पुस्तामा सेन्ट-म्याक्सिमिन जस्तो हंसमुख र अझै रोमाञ्चक खेलाडीहरू हेर्नको लागि सुन्दर चीज हो। निस्सन्देह, उहाँ एक मनपर्दो व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो न्युकासलका अभिभावकहरू आफ्ना बच्चाहरू हुर्किएपछि उनीहरूको अनुकरण गर्न चाहन्छन्। सेन्ट-म्याक्सिमिनले साना प्रशंसकहरूबाट धेरै सम्मान कमाएको छ जसको धेरैले आफ्नो मन्त्र याद गरेका छन्, निर्धक्कै यो गाउँदै.
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
लेख्ने समयमा, एलन सेन्ट-म्याक्सिमिनले आफ्नो परिवारको स्टार्टमतिरको आफ्नो विगतको जालसाजी गरेका छन् आफ्नो फुटबल क्यारियरलाई सबै धन्यवाद। उनका अभिभावकहरूले मिडियाको ध्यानबाट जोगिन सचेत प्रयास गरेका छन्। उनकी पत्नी, बहिनी र परिवारका सदस्यहरूको रेकर्ड अझै लुकेको छ। उनीहरूसँग शायद आफ्नो जीवनको सर्वश्रेष्ठ क्षणहरू हुनुपर्दछ किनभने तिनीहरूको आफ्नै एक एक सुपरस्टार हो भन्ने तथ्यका कारण। फुटबलरमा नबनाउने कुर्तिस हाल आफ्नो सानो भाइको लागि आफ्नो क्यारियर सल्लाहकारको रूपमा सेवा गर्दछन्।
सेन्ट-म्याक्सिमिन रमाउँदछन् जब उनका परिवारका सदस्यहरू खाँचोमा परेका छन्. तपाईंलाई थाँहा थियो?… टाइनेसाइड आइपुगेपछि उनले पहिलो कामहरूमध्ये एउटा थियो निमन्त्रणा स्वीकार्नु र एनयुएफसी फ्यान फूड बैंकलाई- यो स्थान जसले उत्तर पूर्वी इ England्ग्ल्यान्डको विशाल गन्तव्य स्थानलाई समेट्छ। मिडिया प्रयासहरू तिनका छोरीहरूमा केन्द्रित थिए; लियाना र निन्हिया तिनीहरूको चन्दा समयमा।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली
एलन सेन्ट-म्याक्सिमिनको जीवनशैली चिन्नेले तपाईंलाई उसको जीवनस्तरको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
साप्ताहिक ज्याला € 2,000,000 (लेख्ने समयमा) संग लगभग € 38.462 लगभग कमाई निश्चित रूपले उनलाई एक करोडपति फुटबलर बनाउँछ- एक विलासी जीवन शैली को एक संकेत. स्टाइल-सचेत फुटबलर सजिलैसँग सजिलैसँग देख्न सकिने ग्लैमरस जीवनशैलीको मज्जा लिन्छ sed 151,600 मा मूल्यवान छ विलासी सेडानदुई र आधा हप्ता को लागी उनको तलब).
एलन सेन्ट-मैक्सिमिनको कार
जीवनशैलीमा पनि, yआउ र मलाई थाहा छ सेन्ट-म्याक्सिमिनसँग उत्कृष्ट फेशन सेन्स छ जुन खेलको पिचबाट देखियो। को फ्रान्सेली मानिस एक फेसन मोगल हो, जो पिचमा र दुबै ग्लैमरस हेर्न मन पराउछ। आफ्नो शुरुआती बर्षहरूमा देखाईएको छ, दान गर्ने डिजाईनर (विशेष गरी हेडब्यान्ड) पोशाकहरू शुरुआती दिनदेखि नै आफ्नो हस्ताक्षर बनेको छ।
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन जीवनशैली आज शुरू भएन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
उनलाई उनको हेडब्यान्ड डिजाइनर स्टिकर कभर गर्न भनिएको थियो: तपाईंलाई थाँहा थियो?… प्रायोजन नियम तोड्न नक्कल गर्न न्याकासलको स्टार एलन सेन्ट-म्याक्सिमिन एकपटक म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई जितेको बेला उसको £ 180 Gucci हेडब्यान्डलाई स्टिकरले कभर गर्न बाध्य पारियो। त्यो क्षणको दौरानमा, चलाकी खेलाडीले गुच्ची लोगोमा टेपको सेतो टुक्रा राख्नुपर्थ्यो।
एलन सेन्ट-म्याक्सिमिन पीचमा खेल्दा उनको £ 180 Gucci हेडब्यान्ड कभर गर्न बाध्य हुन्छन्। छवि क्रेडिट: सूर्य
फ्यानहरूका लागि एलन सेन्ट-मैक्सिमिनको ट्याटू: भएको सुपर हीरो ट्याटुहरू बेहोश प्रशंसकको लागि हैन। एलन सेन्ट-म्याक्सिमिनको समानताले उनलाई एक सुपरहीरो फ्यान आधार पाइरहेको देखेको छ। यस जस्तो डाइ-हार्ड फ्यानहरू (तल) उनीहरूको शरीरमा स्थायी रूपमा उनको अनुहारको ट्याटू प्राप्त गरेर उनीहरूको प्रेम चिनिन मन पर्दैन।
के उहाँको दैनिक तालिका जस्तो देखिन्छ: एलन सेन्ट-मैक्सिमिन एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले प्राप्त गर्न र आकारमा रहनको लागि एक अद्वितीय कसरत रणनीति प्रयोग गर्दछ। स्टाइलिश फुटबलरले वर्क-आउट गर्ने एक अपरंपरागत तरिकामा काम गर्दछ। सेन्ट-म्याक्सिमिन आफूलाई फिट राख्नको लागि विशेष तरीकाको रूपमा पछाडि दौडन्छन् र आफ्नो सीढिहरू फोर्ट गर्दछन्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो एलन सेन्ट-मैक्सिमिन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
मोनाको फुटबल डायरी
लुूक डे जोंग बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
योआओ माउन्टिनो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
तर, उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्
बर्नोडो सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य